မိဘတှသေိထားသငျ့သညျ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျလေးမြား၏ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုငျရာအခကျြမြား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မိဘတှသေိထားသငျ့သညျ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျလေးမြား၏ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုငျရာအခကျြမြား
လလေ့ာမှုတှအေရ အရှယျရောကျပွီးတဲ့သူတှနေဲ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျတှရေဲ့ ဦးနှောကျအလုပျလုပျပုံခွငျး မတူညီကွပါဘူး။ အရှယျရောကျပွီးသူတှကေ အကွောငျးအကြိုး သခြောစဉျးစားတှေးချေါပွီး ကောငျးကောငျးဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးနဲ့ ရှရေ့ေးကိုပါတှေးချေါ တတျကွပမေယျ့ ဆယျကြျောသကျတှကေတော့ စိတျခံစားမှုနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဦးနှောကျရဲ့ အစိတျအပိုငျးနဲ့တှေးချေါပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျတှရေဲ့ ဦးနှောကျထဲမှာဆိုရငျ စိတျခံစားမှုနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဦးနှောကျအစိတျအပိုငျးနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျတဲ့အစိတျအပိုငျးအကွား ဆကျသှယျတဲ့ လမျးကွောငျးက ဖှံ့ဖွိုးဆဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆယျကြျောသကျတှကေ စိတျခံစားခကျြကိုပဲ ဦးစားပေးကွပါတယျ။
>> မိဘတှအေနနေဲ့ ကလေးတှကေို ဘယျလို လမျးညှနျပေးသငျ့သလဲ?
မိဘဆိုတာ သားသမီးတှအေတှကျ အလှနျအရေးကွီးတဲ့ စံပွလူသားတှဖွေဈပါတယျ။ မိဘတှအေနနေဲ့သားသမီးတှကေို ထိနျးကြောငျးပဲ့ကိုငျတဲ့နညျးလမျးတှကေ ကလေးတှအေပျေါ ကွီးမားတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။
- ကလေးတှကေို လုပျဆောငျခကျြတဈခု၊ အပွုအမူတဈခုရဲ့ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးတှကေို အခကျြအလကျတှနေဲ့ သခြောရှငျးလငျးဆှေးနှေးခွငျးဖွငျ့ ကလေေးတှရေဲ့တှေးချေါနိုငျစှမျးကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဒီလိုပွုလုပျပေးခွငျးကွောငျ့ စိတျခံစားခကျြနဲ့ အတှေးချေါပိုငျးဆိုငျရာ ဦးနှောကျအစိတျအပိုငျးနှဈခုရဲ့ ဆကျသှယျခကျြကို ပိုပွီးဖှံ့ဖွိုးစပေါတယျ။
- ကလေးတှကေို သူတို့က စှမျးဆောငျနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာနဲ့ တျောတယျဆိုတာကို အမွဲပွောပွပေးပါ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ကလေးတှကေ လကျရှိအခြိနျကိုပဲ အာရုံစိုကျလရှေိ့ကွပွီး လူကွီးတှပွေဿနာဖွဈနတောကို ကွုံတှရေ့ရငျ သူတို့ ဘာမှမလုပျပေးနိုငျဘူးလို့ပဲထငျတတျကွပါတယျ။ အရငျက သူတို့လုပျခဲ့ဖူးတဲ့အလုပျတှကေို ပွနျပွောပွပွီး သူတို့ရဲ့စှမျးဆောငျနိုငျစှမျးကို သတိရနပေါစေ။
- ကလေးတှကွေိုကျတတျတဲ့အရာတှေ အလအေ့ထတှကေို အလေးထားပွီး အကြှမျးတဝငျရှိနပေါစေ။ ဆိုလိုတာက မိဘတှအေနနေဲ့ ဟဈဟော့သီခငျြးတှကေို လိုကျပွီးကွိုကျရမယျလို့ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ သူတို့ စိတျဝငျစားတဲ့အရာတှကေို စိတျဝငျတစားရှိခွငျးဖွငျ့ ကလေးတှရေဲ့စိတျထဲမှာ မိဘတှအေတှကျ သူတို့ကအရေးကွီးတယျဆိုတာကို သိသှားစပေါတယျ။
- ကလေးတှကေ သူတို့ရဲ့ပွဿနာတှကေို လာပွောတဲ့အခါမှာ နားထောငျပေးရုံပဲပေးရမလား၊ ဖွရှေငျးပေးဖို့လို သလားဆိုတာကို သူတို့ဆန်ဒကိုမေးမွနျးပါ။ အမြားအားဖွငျ့ မိဘတှကေ ကလေးတှရေဲ့ပွဿနာကို အတငျးဖွရှေငျးပေးလိုကျတာမြိုး၊ ကလေးတှကေို အပွဈတငျတာမြိုးတှလေုပျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ကလေးတှကေ နောကျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့အခကျအခဲတှပွေဿနာတှကေို မိဘတှကေို ဖှငျ့ဟတိုငျပငျဖို့ ကွောကျလာတတျကွပါတယျ။
>> ဆယျကြျောသကျအရှယျကလေးမြား၏ ပုံမှနျမဟုတျသောလက်ခဏာမြား
ဆယျကြျောသကျတှမှော ပုံမှနျအားဖွငျ့ စိတျခံစားလှယျပွီး တဈခါတဈရံမှာ ရကျအတျောကွာငွိမျကြ သှားတတျတာမြိုးတှရှေိပါတယျ။ ဒါကပုံမှနျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးက နှဈပတျကြျောလောကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ အပွုအမူပိုငျးဆိုငျရာ သိသိသာသာပွောငျးနတောဆိုရငျတော့ စိတျကရြောဂါကဲ့သို့သော တဈစုံတဈခု မှားယှငျးနလေို့ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကလေးဒီလိုအခွအေနဖွေဈနရေငျ ကုသမှုမွနျမွနျရရှိဖို့လိုပါတယျ။ စိတျကရြောဂါက ပွငျးထနျပွီးတော့ မကုဘဲထားရငျ အသကျအန်တရာယျအထိပါ စိုးရိမျရနိုငျပါတယျ။
အမှနျတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျတှအေတှကျ မိဘတှရေဲ့ လမျးညှနျမှုဟာ မရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးပုံတှကေို သိထားခွငျးဖွငျ့ မှီခိုမှုကငျးမဲ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို တာဝနျယူနိုငျတဲ့ လူကွီးတဈယောကျဖွဈလာအောငျ အထောကျအကူပေးနိုငျပါတယျ။
လေ့လာမှုတွေအရ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံခြင်း မတူညီကြပါဘူး။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေက အကြောင်းအကျိုး သေချာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ရှေ့ရေးကိုပါတွေးခေါ် တတ်ကြပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်တွေကတော့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းနဲ့တွေးခေါ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာဆိုရင် စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအကြား ဆက်သွယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းက ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေက စိတ်ခံစားချက်ကိုပဲ ဦးစားပေးကြပါတယ်။
>> မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လို လမ်းညွှန်ပေးသင့်သလဲ?
မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ စံပြလူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကို ထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေက ကလေးတွေအပေါ် ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
- ကလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု၊ အပြုအမူတစ်ခုရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို အချက်အလက်တွေနဲ့ သေချာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ကေလေးတွေရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားချက်နဲ့ အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ကို ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။
- ကလေးတွေကို သူတို့က စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ တော်တယ်ဆိုတာကို အမြဲပြောပြပေးပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကလေးတွေက လက်ရှိအချိန်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လေ့ရှိကြပြီး လူကြီးတွေပြဿနာဖြစ်နေတာကို ကြုံတွေ့ရရင် သူတို့ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ပဲထင်တတ်ကြပါတယ်။ အရင်က သူတို့လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အလုပ်တွေကို ပြန်ပြောပြပြီး သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို သတိရနေပါစေ။
- ကလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့အရာတွေ အလေ့အထတွေကို အလေးထားပြီး အကျွမ်းတဝင်ရှိနေပါစေ။ ဆိုလိုတာက မိဘတွေအနေနဲ့ ဟစ်ဟော့သီချင်းတွေကို လိုက်ပြီးကြိုက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကို စိတ်ဝင်တစားရှိခြင်းဖြင့် ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ မိဘတွေအတွက် သူတို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိသွားစေပါတယ်။
- ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကို လာပြောတဲ့အခါမှာ နားထောင်ပေးရုံပဲပေးရမလား၊ ဖြေရှင်းပေးဖို့လို သလားဆိုတာကို သူတို့ဆန္ဒကိုမေးမြန်းပါ။ အများအားဖြင့် မိဘတွေက ကလေးတွေရဲ့ပြဿနာကို အတင်းဖြေရှင်းပေးလိုက်တာမျိုး၊ ကလေးတွေကို အပြစ်တင်တာမျိုးတွေလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကလေးတွေက နောက်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကို မိဘတွေကို ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ဖို့ ကြောက်လာတတ်ကြပါတယ်။
>> ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးများ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သောလက္ခဏာများ
ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်ခံစားလွယ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရက်အတော်ကြာငြိမ်ကျ သွားတတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကလေးက နှစ်ပတ်ကျော်လောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ သိသိသာသာပြောင်းနေတာဆိုရင်တော့ စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သော တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေရင် ကုသမှုမြန်မြန်ရရှိဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါက ပြင်းထန်ပြီးတော့ မကုဘဲထားရင် အသက်အန္တရာယ်အထိပါ စိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေအတွက် မိဘတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးပုံတွေကို သိထားခြင်းဖြင့် မှီခိုမှုကင်းမဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။